China Gas Alarm Controller AEC2392b abavelisi kunye nabanikezeli |Isenzo
1 ~ 4 amanqaku
Iintlobo zerhasi zichongiwe
I-%LEL, 10-6, %VOL kunye neempawu zexabiso lokutshintsha
Irhasi etshayo: max.I-100 (%LEL)
Irhasi enetyhefu: max.9,999 (10-6)
Ioksijini: max.I-100 (%VOL)
≤I-10W (ngaphandle kwezixhobo ezixhasayo)
ubuninzi.imveliso yangoku yesekethe yenkonzo enye 24V≤300mA
Imeko yendawo yokusebenza
Tubushushu: 0℃~40℃;Ubuntu bezizalwane≤93%RH
Impazamo yokubonisa ixabiso
±15% yoxinaniso olothusayo
4 ~ 20mA isignali eqhelekileyo (inkqubo yeentambo ezintathu)
Umgama wothumelo lomqondiso
iiseti ezintlanu zonxibelelwano lweempawu zonxibelelwano, kunye nomthamo we-10A/DC24V okanye 10A/AC220V
Ujongano lwebhasi yeRS485 (iprothokholi yeMODBUS eqhelekileyo)
Ubude × ububanzi × ubukhulu: 365mm×220mm×97mm
Unikezelo lwamandla olulindileyo
Izixhobo zokujonga i-adaptive
I-GQ-AEC2232bX, GT-I-AEC2232aT, AEC2338, GQ-AEC2232bX-P,I-AEC2338-D
Ibhokisi yokudibanisa abalandeli: JB-ZX-AEC2252F
Ibhokisi yokudibanisa i-Solenoid valve: JB-ZX-AEC2252B
● Ukuhlangabezana nemfuno yokudibanisa i-4-20mA i-signer detectors yangoku yangoku kwiindawo ze-1-4;
● Ngobukhulu obuncinci, imveliso inokufakwa eludongeni ngokulula.Iiseti ezimbini okanye ngaphezulu zinokufakelwa ecaleni ukuze kuhlangatyezwane neemfuno zabathengi zeendawo ezingaphezulu zamanqaku (ukufakwa eludongeni kwe-8, 12, 16 okanye iindawo zamanqaku angaphezulu kunokuphunyezwa ngokudityaniswa kwe-gapless);
● Ukubeka iliso kunye nokuboniswa koxinzelelo lwexesha lokwenyani (% LEL, 10-6, %VOL) kunye nokutshintsha iimpawu zexabiso lerhasi etshayo, irhasi enetyhefu kunye neoksijini (esihlala sihleli sisichongi serhasi etshayo. Akukho setingi ifunekayo. Iyafumaneka ukuze ukusetyenziswa emva kokufakwa kunye nombane);
● Isekethe nganye idibanisa imveliso yexabiso lokutshintsha.Ukuba kukho imfuneko, ukusetwa kwenkqubo yokudibanisa kunokuphunyezwa ngemenyu.Imveliso nganye inojongano lwedijithali lweRS485 ukunxibelelana nekhompyuter yenginginya;
● Uluhlu olubonakalayo lukude kwaye i-angle ebonakalayo ibanzi.Ugxininiso lunamanani ama-4 asebenzayo.Bonisa ngokuchaneka kwe-9999 ~ 0.001 ikhona;
● Gcina iirekhodi ezothusayo ze-999 zamva nje kunye neerekhodi ezingama-999 zokungaphumeleli.
3. Umhlaba weCasing
4. Itheminali yoqhagamshelwano lomsebenzisi
5. Itheminali yoqhagamshelwano lomsebenzisi
6. Umngxuma ongenayo
7. Ibhokisi esezantsi
8. Itheminali yokubonelela ngombane
9. Ukutshintsha kombane ongundoqo
10. Ukutshintsha kombane olindileyo
11. Tshintshela unikezelo lwamandla
12. Ibhetri elindileyo
13. Isibambi sebhetri
15. Iphaneli yokulawula
16. Imethi yokungangqubani
Amanqaku ePhaneli kunye neMiyalelo yokuNyusa
● Yenza i-4 okanye i-6 imingxuma yokunyuka (ubunzulu bomngxuma: ≥40mm) eludongeni ngokweemfuno zobukhulu phakathi kwemingxuma yokunyuka (iisimboli zomngxuma 1 - 6) ukunyusa i-plate yokuxhoma;
● Faka ibholithi yokwandisa iplastiki kumngxuma ngamnye wokuxhoma;
● Lungisa i-plate yokuxhoma eludongeni kwaye uyigxininise kwiibholithi zokwandisa kunye ne-4 okanye i-6 self-tapping screws (ST4.2 × 25);
● Jingisa iindawo ezijingayo ezantsi kwesilawuli kwindawo A kwibhodi esezantsi ukugqiba ukunyuswa komlawuli.
I-AEC2392b ineesethi ezi-4 zeetheminali zoqhagamshelwano lwesebe ezinokudityaniswa nezixhobo zonxibelelwano zesebe ezenziwe yinkampani ezifana ne-detectors AEC2232b, AEC2232bX, GQ-AEC2232b, GQ-AEC2232bX kunye ne-AEC2232aT, okanye ezinye ii-transmitters ezine-signal ye-4. iziphumo zokubeka iliso kunye nokulawula ukuxinana kwegesi kwindawo.Okwangoku, ukulawulwa okude okunengqiqo kwizixhobo zangaphandle (kwi-situ evakalayo-ebonakalayo, i-solenoid valves kunye neefeni, njl. njl.) inokuphunyezwa ngeeseti ezi-5 zeemodyuli ezicwangcisiweyo ezakhelwe ngaphakathi.Ukongeza, unxibelelwano olukude kunye nenkqubo yokubeka iliso lunokufezekiswa ngonxibelelwano lwe-RS485.
Ngaphambili: AEC2305 IsiLawuli seAlarm yegesi encinci
Okulandelayo: Uthotho lwe-AEC2232bX enetyhefu kunye neGesi eNtshayo
IAlam yerhasi etshayo, China Gas Detector, Isikhangeli segesi se-lpg, umtshini wegesi onokutsha, isixhobo segesi, umtshini wegesi osisigxina,